Odisha Weekend Getaways | Nzvimbo yakanakisisa yekutenderera kwevhiki
Nguva dzose zvakaoma kuronga mafambiro kunyanya patinoshanda 9 ku5 mumavhiki. Asi zvakadini nevekupera kwevhiki? Kune 52 mavhiki ekupera kwegore. Uchazoshandisa sei? Vanhu vazhinji vanofuratira kure nekufamba-famba pamusana pokuti vanofunga kuti havana nguva yakakwana yekuenda kune imwe nzvimbo pane imwe nzvimbo asi nzvimbo yekutengesa kana mafirimu emitambo. Chero zvazviri, iyo haisi iyo nzira yakanakisisa yekurarama! Imwe nzira yakarurama yekutsvaga kukurudzira kwevhiki yako ndeyekuenda kune motokari kuenda kune Odisha Weekend getaways neSandle Pebbles Tours.
Kufamba hazvireve kuti iwe unofanirwa kubhururuka nhamba yakawanda yemakiromita kuti uende kunzvimbo yako. Dzimwe nguva zvose zvaunoda ndevhiki nevhiki uye motokari ine tangi yakazara yemafuta.
Nzvimbo dzakanaka dzekushanyira nzvimbo dzakakurumbira dzichienda kumahombekombe ezvekushanyira nzvimbo dzakashanyira dzakave dzakagumburwa pakati pevatorwa vekune imwe nyika uye vekushanyirwa. Iyo inoverengeka inoedza kufunga nezvezvido zvakasiyana-siyana zvekupera kwevhiki vanoenda kune imwe nzvimbo zvakapa simba Sand Pebbles kuita shanje inofarira uye yakawedzeredza zviitiko zvakakosha zvesangano sekutengeswa kwevatengi nekuonga. Saizvozvowo, zvikwata zvakagadziridzwa nekuongorora zvakadzikidzika zvinosanganisira Bhubaneswar, Puri, Konark, Chilika, Bhitarkanika nezvimwewo.
IOodisha Weekend getaways inonyanya kugadzirirwa neZvirokwazvo & mararamiro ezvizvarwa, Honeymoon tours, mazendo anozouya nemhuri neshamwari uye eco tours kune zvisikwa zvinodiwa.
Nzvimbo dzekushanyira uye mapuraneti dzinosanganisira kudya mangwanani-ngwanani kune nzvimbo dzose dzekushanyirwa. Mafambisi emazuva ano emazuva ano motokari motokari & coaches vane vane ruzivo uye vakarovedzwa vatengesi vari pamutemo wevatengi. Nzvimbo dzakanaka dzehotera dzine mazano ekugadzirisa mafungiro ezvakagadzirirwa zvakagadzirirwa kugadziridza vatengi kune vose vepamusoro vatashanyi vanoenda kuOudisha.